MOTO HOSI YAKAKONDA
MOTO HOSE PURE uye CABINET
MOTO HYDRANT VALVE
Ungasarudza sei akanakisa mhando yezvokudzimisa moto
Chokudzimisira moto chekutanga chaive nemvumo nekemisiti Ambrose Godfrey muna 1723. Kubva ipapo, mhando zhinji dzezvidzimidzi dzakatangwa, dzakachinjwa nekugadzirwa. Asi chinhu chimwe chinoramba chakangofanana zvisinei nenguva - zvinhu zvina zvinofanirwa kunge zviripo kuti moto uvepo. Izvi zvinhu zvinosanganisira oxygen, kupisa ...
Furo yekudzimisa moto yakachengeteka zvakadii?
Vadzimi vemoto vanoshandisa aqueous Firimu-inogadzira furo (AFFF) kubatsira kudzima moto unonetsa-kurwisa, kunyanya moto unosanganisira peturu kana zvimwe zvinonwiwa zvinokurumidza moto - zvinozivikanwa semoto weClass B. Nekudaro, haazi ese mafuri anopisa moto anosarudzwa seAFFF. Mamwe mafomu eAFFF ane kirasi chemi ...
Nzira ina dzekubata kugona kwedata uye kurishandisa kunatsiridza hutano munharaunda nekuchengeteka
Kudzoka apo Bill Gardner akabatana nebasa remoto munzvimbo iyoyo-yekumaruwa Texas, akauya achida kuita musiyano wakanaka. Nhasi, semukuru pamudyandigere moto mukuru, anozvipira muridzi wemoto uye mukuru mukuru wezvigadzirwa zvemoto zveESO, anoona izvo zvishuwo muzera razvino-uye-rinouya, zvakare. Wedzera ...
Yuyao World Moto Kurwisa Midziyo Fekitori